Doorashooyinka Israel: xarumaha codbixinta oo furan - TELES RELAY
ACCUEIL » UNES • SIYAASADDA Doorashooyinka Israel: xarumaha codbixinta ayaa furan
Doorashooyinka Israel: xarumaha codbixinta ayaa furan
Eliseo Emma Kamgang 9 April 2019
Natiijadu waxay noqon doontaa mid aan la hubin dhamaadka u dhaxeeya liiska labadii Benjamin: Netanyahu's Likud (midig) iyo isbahaysiga Blue-White ee Gantz (midig dhexe).
LRaadiyaha salaasada ayaa la furay talaadada dalka Israel doorashooyinka sharci-dejinta kuwaas oo go'aan ka gaari doona in ra'iisal wasaare Benjamin Netanyahu uu sii wato xukunkiisii ​​dheeraa ama haddii uu isbeddel la yimid Benny Gantz.
Qaar ka mid ah 6,3 malaayiin codbixiyayaal ah ayaa loogu yeeraa inay doortaan 22h xildhibaanno 120 oo iyaguna matalaya Knesset. Warqadda codbixinta waxay u muuqataa mid aftahan ahBibi"Nidaamka nambarka oo dhan oo dhammaan dadyadiisu ay ogaadeen Netanyahu, inay awood u leeyihiin in ka badan sanado 13.
Cod-bixiyayaashu waxay dooran doonaan dugsiyada, hoolalka magaalada ama xeryaha ka mid ah afartan liis ee liiska, si ay u doortaan xildhibaanada 120 kuwaas oo matalaya Knesset.
Wadanku wuxuu qaban doonaa neefkiisa marka cod-bixintu ay xiran tahay marka cod-bixiyeyaasha ugu horreeya la daabici doono. Natiijadu waxay noqon doontaa mid aan la hubin dhammaadka labadii liis ee labada Benjamin: Likud (midig) oo "BibiNetanyahu iyo isbahaysiga buluuga ah (midigta dhexe) ee "BennyGantz.
Hal dhinac, Netanyahu, 69 sano, oo ka badan sanadihii 13 ee awood u leh in uu fuliyo hawlgallada millatari ee dalkiisa iyo inuu la mid noqdo kuwa ugu waaweyn adduunka.
Waxa uu raadinayay waajibaad shanaad ah oo laga yaabo in uu yahay rikoodh soconaya, kaas oo uu ku qaadan lahaa Luulyo taariikhda David Ben Gurion, haddii madaxweyne Reuven Rivlin, oo la siiyey qaybta Baarlamaanka, hawsha sameynta dowladda soo socota.
Isagoo wajahaya, oo ay ka mid yihiin Benny Gantz, 59 sano, horjooge hore, taliyihii hore ee qayb ciidan oo khaas ah iyo madaxa hore ee shaqaalaha.
Gantz ma aysan soo gelin siyaasad wax ka yar lix bilood ka hor.
Iyadoo aan wax bandhigyo kala duwan ah la sameynin, ololahaan ayaa u muuqday in doorashooyinkan ay ku noqonayaan aftida qofkii Netanyahu, oo ay ku caan baxeen qaar, oo ay neceb yihiin dad kale, oo aan cidna ka tegin.
Wixii Gantz ah, dhammaantood waa in la joojiyo sanadaha kala qaybinta iyo musuq-maasuqa ka soo baxay ra'iisal wasaarihii hore. Ninka Netanyahu, qofna ma ka fiican yahay inuu damaanad qaado nabadgelyada iyo barwaaqadiisa.
Cameroon - Mvila: dhallinyaro si ay u dagaalaan doorashooyinka soo socda
Tiknoolajiyada 5G: Faransiiska ayaa soo saaro "Sharciga Huawei", ama halkii laga heli lahaa "farsamo iyo farsamo ahaan xagga dhibaatada farsamada iyo tiknoolajiyada. "